Emelitere: Ngwa Delta 8 THC ọ bụ iwu na steeti m?
Onye edemede Saul Meshach
Anyị nwetara ozi mmelite nke steeti Nevada amachibidoro ire na nkesa Delta 8 THC ngwaahịa. Ị nwere ike ịtụ anya steeti ndị ọzọ nwere wii wii nke iwu kwadoro ime otu ihe ahụ maka ichebe iwu akwadoghị ha MGBE ụtụ. Ekwuputabeghị nke a na akụkọ. nke a bụ akwụkwọ ozi nke otu onye mụ na ya na -azụkọ ahịa zitere m.
Ndị omebe iwu Texas jụrụ ime Delta 8 THC iwu na-akwadoghị
Emelitere: May 25, 2021
Delta-8 THC bụ iwu ugbu a na ọtụtụ steeti, ụfọdụ steeti etinyela mmachibido ma ọ bụ mgbochi. Nke a bụ ozi mmelite kachasị emelitere anyị site n'aka Red Emperor CBD. Ọ bụ ọrụ gị ịgbaso iwu steeti niile mana ọ bụrụ na ị bụ Federally Legal Delta 8 -THC bụ %100 %iwu ekele maka Trump Farm Bill nke 2018 nke nyere iwu CBD na ihe niile dị na osisi ahụ. Biko nyere aka gbasaa ozi gbasara Delta-8 THC ọkachasị na steeti ndị iwu akwadoghị. Ha nyere onye isi ojii n'izu gara aga Ndụ n'ime ụlọ mkpọrọ na -enweghị Parole na Mississippi maka inwe otu ounce cannabis. Hụ: https://nypost.com/2021/05/13/court-upholds-life-sentence-for-man-convicted-of-marijuana-possession/
A ka na -ejide ndị pere mpe ma nye ha ndekọ mpụ nke na -adịgide na ndekọ ha maka ndụ na steeti ụfọdụ ebe ndị ọzọ na -ere ọtụtụ ijeri n'efu. Anyị nwere ike inye aka kwụsị ikpe na -ezighị ezi a ugbu a.
Nke a bụ ndepụta steeti nwere mmachibido iwu efu ma ọ bụ mmachi ugbu a
Delta 8 THC Iwu site na steeti
Delta 8 n'ụzọ zuru oke
Iwu gbasara ntụrụndụ
Alabama Ee Mba
Alaska Mba Ee
Arizona Mba Ee
Arkansas Mba Mba
California Ee Ee
Colorado Mba Ee
Connecticut ee Ee
Ihichapụ Mba Ee
District of Columbia Ee Ee
Florida Ee Mba
Georgia Ee Mba
Hawaii Ee Ee
Idaho Mba Mba
Illinois Ee Ee
Indiana Ee Mba
Iowa Mba Mba
Kansas Ee Mba
Kentucky Mba Mba
Louisiana Ee Mba
Maine Ee Ee
Maryland Ee Ee
Massachusetts Ee Ee
Michigan Ee Ee
Minnesota Ee Mba
Mississippi Ee Mba
Missouri Ee Mba
Montana Mba Ee
Nebraska Ee Mba
Nevada Enweghị mmelite 6/30/21 Ee
New Hamshire Ee Mba
New Jersey Ee Ee
New Mexico Ee Mba
New York Amachibidoro Smokalbles Ee
North Carolina Ee Mba
North Dakota Ee Mba
Ohio Ee Mba
Oklahoma Ee Ee
Oregon Ee Ee
Pennslyvania Ee Mba
Rhode Island Mba Ee
South Carolina Ee Mba
South Dakota Ee Mba
Tennesee Ee Mba
Texas Ee Mba
Utah Mba Mba
Vermont Mba Ee
Virginia Ee Mba
Washington Ee Ndụmọdụ naanị Ee
West Virginia Mba Mba
Wisconsin Ee Mba
Wyoming Ee Mba
Delta-8 THC abụrụla ngwaahịa kacha ere ere hemp nke enyere n'iwu na ụgwọ ugbo 2018, yana ka ọ na-abawanye na steeti ndị ọzọ na-ewu ewu na-anwa machibido ya. Akụkụ dị ịtụnanya bụ ọtụtụ steeti na akwụkwọ ikike cannabis machibidoro ngwaahịa Delta 8. Ihe kpatara ya? Ọ na -ebipụ ụtụ isi na -ezighi ezi ha na -anakọta n'aka ndị ọchụnta ego. Ị na -ahụ na ọ bụ imebi ikike iwu kwadoro gị ịkwụ ụtụ isi na ọgwụ oge 1 n'ihi na ị na -ekweta na mpụ obodo. N'ezie, ọ bụrụ na ịre karịa nde $ 20 nke wii wii Delta THC 9 Gọọmentị US nwere ike gbuo gị n'okpuru Iwu Federal King Ping. Lee Nnukwu ohi ụtụ wii wii. Uhie Uhie ekepụtala maapụ na-egosi steeti Delta-8 bụ nke iwu kwadoro ugbu a ma ọ bụ machibidoro ya iwu.
Delta-8 THC na-abụkarị cannabinoid na-esite na osisi hemp wee nweta iwu na Bill Farm 2018 nke Donald Trump. N'ihi na ọtụtụ ụgbọ ala Delta 8 na ngwaahịa ndị ọzọ dị n'ahịa na -ahazi nke ọma na anaghị ewepụta ya. A gbanwere Delta-8 THC site na CBD, usoro ahụ yana ihe na-emetụta mmụọ na ihe na-egbu egbu emeela ka ụfọdụ steeti nwaa itinye mmachibido na ngwaahịa a.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche ọtụtụ ụlọ ahịa CBD gburugburu steeti ebe wii wii na -akwadoghị na -ere ngwaahịa Delta 8 THC na ụlọ ahịa CBD ha ọbụna n'ime ụlọ ahịa. N'ezie, DEA ga -abata wee nwaa itu egwu ndị ọchụnta ego n'ihi na ọ na -ekwu na ọ dị n'akwụkwọ oroma. Ị ga -achọpụta na ha anaghị ekwu SHIT gbasara ịjuanaụ wii wii na -enweghị isi na California, Washington, Colorado na ọtụtụ steeti ndị ọzọ. Mụ onwe m chere na DEA na -achịkwa ọtụtụ akwụkwọ mgbasa ozi iwu. Ọ bụ na ị hụghị na ọ bụ ihe nzuzu na onye nnọchi anya DEA ga -abanye n'ahịa Marijuana ka ọ na -aga n'iwu ka oge niile na -atụba ụmụ amaala n'ime ụlọ na ndị na -edina mmadụ n'ike na ndị na -emegbu ụmụaka otu afọ gara aga? Ọ na -esi m ụdị azụ̀, ị naghị eche?
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ DUMB dị ka Google [Danny The Worlds's sumbest Sntich] Huh? Watson?
Ịchọpụtabeghị otu n'ime nde dollar kwa ọnwa Ndị na -enye akwụkwọ ikike iwu na -eji uru ndị ahụ niile tọhapụ ndị mkpọrọ n'ụlọ mkpọrọ maka ire wii wii. Anyị ebe a na Red Emperor Collect na -enye pasent 20 nke uru niile n'okwu ikpe ebe anyị kwenyere ndị pere mpe na ịnata CRUEL na ntaramahụhụ na -adịghị ahụkebe maka ịtụ mkpọrọ mgbe ụmụ amaala US ndị ọzọ na -ere ọtụtụ ijeri n'ọnwa. Nke a bụkwa oke mmebi megidere ikike iwu kwadoro nke nchedo nha anya n'okpuru iwu.
Ugbu a, amachibidoro ma ọ bụ machibido Delta-8 na Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Kentucky, Idaho, Iowa, Montana, New York, Rhode Island, Utah, Vermont, na Washington (Nanị Ndụmọdụ). Mmachibido enweghị ike ịbụ ngwaahịa vape ma ọ bụ smokable delt8 mana gummies soft gels na nri dị mma yabụ gbaa mbọ hụ na ị lere iwu steeti na iwu mpaghara gị, anyị ga -emelite ibe a oge ọ bụla ihe gbanwere.
A na -atụle mmachibido iwu na nkọwapụta iwu ugbu a na steeti ndị ọzọ gụnyere Oregon, Michigan, North Dakota, Oklahoma, na Illinois.
Alabama dị ugbu a tiri iwu ka ewepu Delta 8 ka ọ bụrụ iwu na -akwadoghị iji nyere ndị ọrụ ugbo ha na -akọ ugbo aka. Yabụ ị nwere ike ịgbanwe steeti ahụ ka ọ bụrụ GREEN.
Ọ bụrụ na ịchọghị ihe ọzọ ị ga -agwa ndị enyi gị gbasara Delta 8 THC, Ha na -atọrọ ụmụaka na Alabama ebe Delta 8 THC bụ iwu dị pasenti 100. Ọ bụrụ na ọ na -ese anwụrụ ngwaahịa anyị bụ ndị ọzọ nwalere wee kpọọ ha coudlnt ọbụna tinye ya ihe mkpuchi aka hapụ ya kpụrụ nwa ya. https://www.al.com/crime/2021/06/alabama-removes-toddler-from-michigan-family-found-with-marijuana.html?outputType=amp
Ị nwere ike ịtụ anya na steeti ndị ọzọ ga -amachibido ha iwu ma ị nwere ike ịtụ anya ihe ịma aka ndị ọzọ gbasara iwu ọkachasị na steeti ndị nweburu ụlọ ọrụ ntụrụndụ na achọghị Delta 8 ka ha tinye n'ime ụtụ ụtụ isi ha. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na -etinye iwu ka anyị na -ekwu maka ị mariụ wii wii na ọkwa gọọmentị etiti yabụ na ọ ga -abụ nzuzu na ha bido ibuso Delta 8 agha mgbe ha kwuchara na ha hụrụ Black Black n'anya nke ukwuu. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ha lebara anya n'ezie, ha ga-akwado wii wii iwu wee hapụ ha niile ka ha pụọ ​​n'ụlọ mkpọrọ maka mpụ adịgboroja nke gọọmentị Nixon mepụtara.
Lee: Akụkọ na-awụ akpata oyi n'ahụ na-ekwupụta ọkwa Nixon banyere 'Agha na Ọgwụ' n'ụbọchị a na 1971 nke ezubere maka ndị isi ojii na ndị na-emegide agha | Ụlọ ọrụ America Enterprise - AEI
Ihe ngwugwu Red Emperor CBD niile na -abịa koodu nyocha ka ndị mmanye iwu na ndị ọka iwu agaghị enwe ike ijide ma ọ bụ kpee ikpe na steeti na -etinyebeghị mmachibido iwu. Onye na -ere ahịa mpaghara gị nwere ike ime nke ahụ ?? Nwalee ya ugbu a site na iji ama gị ka inyocha koodu dị na foto dị n'okpuru.
Ọ dịtụla mgbe ịchọrọ inwe Dispensary gị? Ọfọn ebe a bụ ohere gị. Anyị nwekwara nnukwu na nnukwu ọnụ ahịa maka ngwaahịa Delta 8 THC.
Nweta kọmpụta 10 % na ahịa Delta 8 THC niile sitere n'aka ndị enyi gị na ndị enyi mgbasa ozi mmekọrịta. Email sales@Redem EmperorCBD.com ka ịdebanye aha.
CBD na Delta 8 THC ngwaahịa nwere ike ree onye ahịa ọ bụla. enweghị ikike pụrụ iche achọrọ ma ọ bụ ụtụ isi ọpụrụiche. Ọ bụrụ na ị na -achọ Nnukwu ma ọ bụ N'ogbe Delta 8 THC ngwaahịa Red Emperor Network nwere ohere nweta nnukwu ugbo CBD & Delta 8 THC na United States. Ị nwere ike ịchọta ndepụta na ọnụahịa anyị ugbu a ebe a.
Nnukwu Delta 8 THC Ngwaahịa
Njikọ njikọ: https://journal.cannabislaw.report/buscher-law-delta-8-thc-is-still-legal-despite-the-new-dea-rule/